Nidera an'i Burkina Faso, Liberia, Nizeria, Sierra Leone ny birao fizahantany afrikanina izay nampakatra an'i Tokyo
Home » Vaovao momba ny fizahan-tany any Afrika » Nidera an'i Burkina Faso, Liberia, Nizeria, Sierra Leone ny birao fizahantany afrikanina izay nampakatra an'i Tokyo
varotra ivoara japon
Nohamafisin'ny firenena afrikanina ny governemanta Tokyo hanidy tsena ivory mialoha ny fivorian'ny governemanta 29 martsa.
Ny taratasy avy amin'ny firenena afrikanina efatra dia nalefa tany amin'ny governoran'i Tokyo, Yuriko Koike, niangavy mba hiaro ny elefanta amin'ny varotra ivoara.
Ny fitohizan'ny tsena ivory malalaka any Japon dia misy fiatraikany amin'ny krizy fikaroham-bola, na mivantana na ankolaka.
Na dia nanaiky ny hikatona aza i Japon dia tsena ivoara amin'ny 2016, misy porofo an-tsoratra momba ny varotra tsy ara-dalàna sy ny lesoka tsy mitombina amin'ny fifehezana ny varotra ivoara any Japon.
Firenena afrikanina efatra no miangavy ny Governemanta Metropolitan Tokyo hanidy ny tsenany ivoara mialoha ny fivorian'ny vondron-kery hijerena ny olana.
Tao amin'ny taratasy nalefa tamin'i Yuriko Koike, ny governoran'i Tokyo, ny solontena avy amin'ny governemanta Burkina Faso, Liberia, Niger, ary Sierra Leone dia nanoratra hoe: "Raha ny fomba fijerinay, hiarovana ny elefanta aminay amin'ny varotra ivoara dia zava-dehibe tokoa ny ivoara Tokyo hakatona ny tsena ary tsy misy afa-tsy fetra voafetra ihany.
"Raha nihena ny haavon'ny varotra tany Japon hatramin'ny tampony tamin'ny 1980, ny fijanonan'ny tsena malalaka malalaka any Japana dia nisy fiatraikany tamin'ny krizy fangalarana hazandrano, na tamin'ny ankolaka na tamin'ny ankolaka, izay nanentana ny fangatahana ivoara mitohy rehefa mihidy ny tsena hafa arovy ny elefanta. ”
The Biraon'ny fizahantany afrikanina (ATB) manohana mafy ny ezaka ataon'ity Burkina Faso, Liberia, Niger ary Sierra Leon ity, hoy i Cuthbert Ncube, filohan'ny ATB, amin'izao fotoana izao amin'ny fitsidihana ofisialy any Ivory Coast.
Tamin'ny taona 2016, nanaiky ny hanakatona ny tsenany ivoara i Japon tamin'ny fivoriana faha-17 an'ny Konferansa an'ny Ankolafy (CoP17) tamin'ny Fifanarahana iraisampirenena momba ny varotra iraisam-pirenena amin'ny karazan-biby fauna sy flora (CITES) tandindonin-doza. Saingy nanamarika ireo taratasy fa “na dia misy porofo an-tsoratra momba ny varotra tsy ara-dalàna sy ny lesoka tsy mandeha amin'ny laoniny amin'ny fifehezana ny varotra ivoara any Japon aza, ny Governemanta Japon dia tsy nanao zavatra hanatanterahana ny fanoloran-tenany sy hanidy ny tsena ivory, nanosika anay hangataka mivantana any Tokyo mba handray andraikitra. ”
Ireo firenena efatra dia mpikambana ao amin'ny African Elephant Coalition, vondrona firenena afrikanina 32 natokana hiarovana ny elefanta ao Afrika, anisan'izany ny varotra ivoara. Ny filankevitry ny zokiolona ao amin'ny fiaraha-mitantana dia nandefa taratasy tany amin'ny governoran'i Tokyo tamin'ny volana Jona 2020, nanohitra azy tamin'ny “fanomezana ohatra ara-tsindrimandry iraisampirenena, sy nitarihana an'i Japana amin'ny làlan'ny fiarovana maharitra.
Ny fivoriana manaraka an'ny governemanta Tokyo Komity mpanolotsaina momba ny lalàna mifehy ny varotra ivoara , voampanga amin'ny fanombanana ny varotra sy ny lalàna mifehy ny ivory ao an-tanàna, dia hiantso ny 29 martsa. Misokatra ho an'ny besinimaro ny fivoriana ary halefa mivantana Eto manomboka amin'ny 2:00 ka hatramin'ny 4:00 PM Fotoana Tokyo (07: 00-09: 00 UTC). Ny tatitra avy amin'ny Komity Mpanolo-tsaina dia andrasana ao anatin'ny volana vitsivitsy.
Ny hetsiky ny fiaraha-mitantana dia ampahany amin'ny ezaka iraisam-pirenena mandresy lahatra ny Governora Koike sy ny komity hanidy ny tsena ivory Tokyo ary misy taratasy avy amin'i:
- Fikambanana iraisam-pirenena miaro tontolo iainana sy tontolo iainana tsy miankina amin'ny fanjakana 26 (18 feb 2021) (Anglisy) (Japoney)
- Fikambanan'ny zoo & Aquarium (Jolay 31, 2020)
- Vonjeo ny Elefanta (Jolay 8, 2020)
- Ben'ny tanàna New York, Bill de Blasio (May 8, 2019).
“Tokony ho voarara avy hatrany ny varotra ivoara any Tokyo - ivon'ny varotra ivoara sy fanondranana tsy ara-dalàna - tsy miandry valiny amin'ny sehatra nasionaly,” hoy i Masayuki Sakamoto, talen'ny fahefana Tiger Japan and Elephant Fund. "Japon dia taraiky any ambadiky ny firenen-kafa amin'ny fanidiana ny tsenany ivoara, ka ny hetsika nataon'ny komity dia hojeren'ny vondrom-piarahamonina iraisam-pirenena."
Sambo fitsangantsanganana vonona hiondrana an-tsambo any Etazonia indray